वादी समुदाय मुआब्जाबाट वञ्चित: रकम निकाशा भएपनि पाएनन् पिडितले
माघ ०९, २०७४ BNNTV
जाजरकोट । नलसिंङगाड जलविद्युत् आयोजनाका डुबान प्रभावित क्षेत्रका वादी समुदायले मुआब्जा पाउन सकेका छैन्न ।
नलगाड नगरपालिका–१ दल्लीका १८ घरपरिवार वादी समुदाय मुआब्जा पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । त्रिभुवन उच्च मावि दल्लीको खातामा १८ घरपरिवारको मुआब्जा रकम निकासा भए पनि तीन वर्षदेखि सो रकम वादी समुदायले पाउन सकेको छैन ।
विद्यालयले सो रकम वादी समुदायलाई दिन आनाकानी गदै आएको छ । लामो समयदेखि वादी समुदाय विद्यालयको जमिनमा घर निर्माण गरि बस्दै आएको छ । सो समुदाय बसेको जमिन विद्यालयले आफ्नो नाममा लिएपछि विद्यालयको नाममा नलसिंङगाड जलविद्युत् आयोजनाले रकम निकासा गरेको छ । अहिले सो क्षेत्र आयोजनाले लिएपछि वादी समुदाय घर न घाटको अवस्थामा छ ।
वादी समुदायसँग एक टुक्रा जमिन छैन् । आयोजना र विद्यालयले वादी समुदायलाई मुआब्जा दिने निर्णय गरे पनि तीन वर्षदेखि सो रकम नदिँदा समस्या भएको हो । वादी समुदाय अहिले जीवन निर्वाहका लागि दल्लीमा दैनिक माछा मार्दै आएको छ ।
नलगाड सरोकार समितिका अध्यक्ष तथा जाजरकोट क्षेत्र नं १ का सांसद गणेशप्रसाद सिंहले वादी समुदायलाई तत्काल मुआब्जा दिन आग्रह गर्नुभयो । पहिले गरेका सहमति पालन गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, माघ ०९, २०७४१४:०४
ल्यापटपमा काम गर्ने बानि छ भने सावधान, आयो यस्तो रिपोर्ट!
सरकारले पप्पुलाई कारबाही गरेकोमा निर्माण व्यवसायी महासंघले बिरोध गर्दै निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति
अटोबाट खसेकी महिलाको ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु , स्थानीयद्वारा प्रदर्शन ,स्थिति तनावग्रस्त !
अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन दौड जेठ ५मा हुँदै
सिरिज जित्ने खेलाडीलाई सरकारले पाँच लाख दिने !
४४ मिनेट अगाडि PARWATI